Kurota nzvimbo muThailand neBhutan dzinogamuchira mahotera matsva eD2
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Kurota nzvimbo muThailand neBhutan dzinogamuchira mahotera matsva eD2
Bhutan Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Resorts • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Dusit International, imwe yemakambani anotungamira ehotera nekuvandudza zvivakwa muThailand, yaenderera mberi nekuwedzera kwayo kwepasirese nekuvhura zvinyoro nyowani mahotera matsva pasi payo yepamusoro-soro dusitD2 brand - dusitD2 Yarkay Thimphu, Bhutan uye dusitD2 Ao Nang, Krabi (Thailand).
Yakavhurwa musi wa15 Zvita 2018, dusitD2 Ao Nang, Krabi inoisa vashanyi mukati mekufamba kwemahombekombe uye zvimwe zvinokwezva mudhorobha rakakurumbira remahombekombe, muSouth Thailand.
Yakavhurwa musi wa19 Zvita 2018, zvakadaro, dusitD2 Yarkay Thimphu, Bhutan inoshanda seye yekutanga uye hombe hotera yepasirese-yakamisikidzwa muumambo hunonakidza. Kutora kurudziro kubva kuVana Vanowirirana Shamwari, inodiwa yenyika mhuka dzinenge ina dzinoshanda pamwechete kukohwa michero kubva pamuti wemashiripiti, yega yega muyenzi pasi pehotera yakatsaurirwa kune imwe mhuka yakasiyana kubva mungano. Mavara uye echinyakare maficha ezvisikwa anoshongedza madziro eimwe neimwe ye83 dzakanyatsogadzirirwa dzimba dzevaeni uye masuti.
Pamwe padhuze nehotera yakanaka inoratidzira hunyanzvi hwemuno, zvinopihwa parizvino zvehotera zvinosanganisira Thai spa, jimi rakashongedzerwa zvakakwana neresitorendi yekudyira yezuva rese. Bhawa rine simba uye yekutanga yekudyira yeThai muBhutan ichatevera munguva pfupi inotevera.
Zvinokwezva zvakakurumbira seBuddha Point (Kuensel-Phodrang), iconic Tashichho Dzong, Royal Botanical Park, uye Clock Tower Square zvese zvinowanikwa nyore nyore kubva kuhotera yepamberi-peguta nzvimbo muguta guru rehumambo, Thimphu.
"Yakagadzirirwa kuratidzira uye kutarisira zvishuwo nezvishuwo zvevafambi vemazuva ano vane hukama hwakabatana, nzvimbo dzedu dzekutandarira dusitD2 dzinosanganisira musanganiswa wakasarudzika wenyaradzo, nyore uye chimiro, tichigadzira nzvimbo dzakanaka dzevashanyi kusangana pamwe nekudyidzana," vakadaro VaLim Boon Kwee, Chief Operating Mukuru, Dusit International. "Tiri kufara kugamuchira dusitD2 Yarkay Thimphu, Bhutan uye dusitD2 Ao Nang, Krabi kunzvimbo yedu iri kukurumidza kukura yemahotera epasirese, uye tinotarisira kufadza vashanyi nerudzi rwedu rwakasiyana rwekugamuchira vaeni zvakanaka."